S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာ ရာသီ2နောက်ဆုံးအွန်လိုင်း - တီဗီ
S.H.I.E.L.D. ၏အံ့ဖွယ်အရာများကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာ ရာသီ2နောက်ဆုံးအွန်လိုင်း
Black Mirror သည် Netflix မူရင်းစီးရီးဖြစ်နိုင်သည် တရားဝင် Trailer အကြား Netflix ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည် တီဗီ က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
သင်ကြည့်နိုင်သည့်နေရာ S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များ ရာသီ2နောက်ဆုံးအွန်လိုင်း
စောင့်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာ online ကိုရှာခြင်း S.H.I.E.L.D. ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ ? ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကျိန်းသေကူညီနိုင်သည်!
ဒီနေ့ S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များ သူတို့ရဲ့ဒုတိယရာသီကိုအထူးနှစ်ပိုင်းပါ ၀ င်သည့်နှစ်နာရီကြာနိဂုံးချုပ်ဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ နှင့် EPIC!, ဒါပေမယ့်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်ရန်သင့်ပါပဲ။ သင်၏ကေဘယ်ကြိုးဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ကေဘယ်ကြိုးသို့မဟုတ်ချက်ချင်းထုတ်လွှင့်နိုင်ခြင်းမရှိပါကကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်သင်ကြည့်။ မရပါ S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များ9p.m. မှာထုတ်လွှင့သည့်အခါ ABC ရုပ်သံအပေါ် EST ။
သင်သို့သော်ကြည့်နိုင်သည် S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များ Hulu အပေါ်။ Hulu ရဲ့သဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များ နောက်တစ်နေ့တွင် Hulu Plus သုံးစွဲသူများ (သို့) တီဗီပံ့ပိုးသူကိုအသုံးပြုသူများအတွက် Hulu တွင်ဖြန့်ချိသည်။
ရာသီ2အပြီးသတ်၏ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် preview ကိုကြည့်ပါ!
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ သင့်မှာ Hulu Plus မရှိဘူးဆိုရင်၊ သင်ဟာဒီဇာတ်လမ်းကို Hulu မှာအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမတိုင်မီဇာတ်လမ်းတွဲထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်ရှစ်ရက်လောက်စောင့်ရပါမယ်။
ကြောင်းနှင့်အတူ, Two- တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များ ဇာတျသိမျးကိုမေလ ၂၀ ရက်နေ့မှာအခမဲ့ Hulu မှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ မင်းကဒီအချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းဟာကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤမျှကြာရှည်စွာမစောင့်နိုင်လျှင်၊ သင်၌ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် Hulu Plus အခမဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုတစ်ခါမှမပြုလုပ်ဖူးပါက၊ အခမဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးဝန်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက Hulu Plus သည်အနည်းဆုံး cable နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အထူးသဖြင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သဘောပေါက်သည်။
၁။ Hulu Plus တွင်စာရင်းသွင်းပါ
၂။ Hulu Plus အခမဲ့စမ်းသပ်မှုကိုစမ်းကြည့်ပါ (သင်အရင်ကမလုပ်ဖူးသေးလျှင်)
၃။ ၈ ရက်လောက်စောင့်ပြီး Hulu မှာအခမဲ့ကြည့်ပါ။
သင်စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမိလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ ခိုးကူးထားသောဗားရှင်းကိုယနေ့ညအခမဲ့ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
ဤကိစ္စအတွက် TV ပင်လယ်ဓားပြသို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုပင်လယ်ဓားပြမဖြစ်သင့်ပါ။ ၎င်းသည်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးစေသည်။ သင်တီဗွီရှိုးတစ်ခုကြိုက်လျှင်၎င်းအတွက်ပေးဆပ်ပါ၊
သင်တစ် ဦး ပန်ကာမဟုတ်ပါဘူးလျှင် S.H.I.E.L.D. ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ Netflix တွင်ပထမဆုံးရာသီကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ Netflix မှာအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များ 50 နေရာတွင်ရှိသည်! ဒုတိယရာသီ Netflix သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်, S.H.I.E.L.D ၏ကိုယ်စားလှယ် ။ တက်နေသည်!
မည်မျှရာသီဆယ်ကျော်သက် mom, ၏ရှိပါတယ်
အဆိုပါလမ်းလျှောက်သေပြီရာသီ9ဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ရှု 5
အဆိုပါ byers ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါ
netflix 2016 အပေါ်မိသားစုဟယ်လိုရုပ်ရှင်